We want to Light in Ayeyawaddy
"Yathedaung look like pleasant island "
Although summer time, everybody can see fog in the sky . Colourful flags posting in Yathedaung Substation were waved through blowing air. At the enterance of this substation , there isaportal for opening ceremony. Besides the concrete road, we have been preparing two stages for these ceremony . The record photos and printed vinyl background which were constructed by Ministry of Electricity and Energy for electricity supply to Rakhine State can be seen proudly along chainlink fencing of Switchyard's face. Nowaday , the opening ceremony for Yathedaung Substation will be opened in near future.
National Grid connects to Yathedaung
Yathedaung in Rakhine start can state to use electricity via National Grid on 1st April, 2018. Along the Ponnagyun - Yathedaung - Buthidaung road, silver transmission towers and transmission lines can be seen proudly. So, this is auspicious time for Rakhine State.
ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ (ဓာတ်အားစနစ် ပြတ်တောက်မှု - System Break အဆက်)
ဓာတ်အားစနစ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု (System Break) ဖြစ်ရခြင်း အကြောင်း……… မြန်မာနိုင်ငံ ဓာတ်အားစနစ်၏ အားနည်းချက်များ ပြုပြင်ရန် အချက်များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလ ၄ ရက်နေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့ရာ….. တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပင် ၎င်းနေ့ညနေပိုင်းတွင်... ဓာတ်အားစနစ် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှု( System Break) ဖြစ်ရပြန်ပါသည်….. System Break ဖြစ်ကြောင်း..လျှပ်စစ်ဌာနဆိုင်ရာ Website များနှင့် Facebook များတွင် …System Break ဖြစ်၍… ဓာတ်အားပြတ်တောက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း… အသိပေး ဖော်ပြထားချက် ကို ဖတ်ရသော ရန်ကုန်မှ မိတ်ဆွေရင်းတစ်ဦးက ..ယခုရက်ပိုင်း…မီးပျက်တာတွေမှာ …System Break ကြောင့်…မီးပျက်ပါကြောင်း..အသိပေးချက်တွေ ...များနေပါကြောင်း.... ဓာတ်အားမလုံ လောက်လို့ .. ဓာတ်အားပြတ်တောက်တာနဲ့.. System Break ဖြစ်ရတာတွေနဲ့ …နားမလည်နိုင် တော့ဘူးဟု… ပြောလာပါသည်။
ကျေးရွာများ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေး ဆောင်ရွက်မှုများ
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မတိုင်မီကာလက ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုသည် ၁၆၉၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၁၂% သာရှိပြီး ဓာတ်အား လုံလောက်မှုမရှိခြင်းကြောင့် မြို့၊ ကျေးရွာများ ဓာတ်အားတိုးချဲ့ပေးနိုင်မှု တိုးတက်မှု နည်းခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင် ရေအားလျှပ်စစ်စက်များဖြစ်သည့် ရွှေလီ၊ ရဲရွာ စက်ရုံများ လည်ပတ်ပြီးနောက် နိုင်ငံတော်အနေဖြင့် ဓာတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးချဲ့ဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားတိုးချဲ့ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးအတွက် အခြေခံကျသော ဓာတ်အားလိုင်းများ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံများကို ဦးစွာတည်ဆောက်ရပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့၊ ကျေးရွာများဓာတ်အား ရရှိရေးအတွက် ၂၃၀ ကေဗွီ၊ ၆၆ ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်းများ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံများကို ဦးစွာတည်ဆောက်ရပါသည်။ မြို့၊ ကျေးရွာ မီးလင်းရေးအတွက် ၁၁ ကေဗွီလိုင်း၊ ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ထရန်စဖော်မာ၊ ၄၀၀ ဗို့ဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ဆက်လက်တည်ဆောက်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကာလတွင် ဘဏ္ဍာငွေ ရရှိမှုအရ ဓာတ်အားလိုင်းများ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံများ တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာတွင်းအရောက် လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်မှု မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျေးရွာများအနေဖြင့် မိမိရွာအနီး ရောက်ရှိနေသော ဓာတ်အားလိုင်းများမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီအစီအစဉ်ဖြင့် ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး ဓာတ်အားရယူမှုကို ခွင့်ပြုပေးခဲ့ပြီး မြို့နယ် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးများက နည်းပညာပိုင်း ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မိမိရွာအနား ရောက်နေသော ရေလွှတ်မြောင်းမှ ရေကို ဌာနက ဆောင်ရွက်ပေးမည့်အချိန်ကို မစောင့်ဘဲ မိမိကျေးရွာအတွင်း ရောက်ရှိအောင် ကျေးရွာအစီအစဉ်ဖြင့် မြောင်းဖောက်ယူခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာမီးလင်းရေးများအနေဖြင့်လည်း ကျေးရွာအနီး ရောက်နေသော ဓာတ်အားလိုင်းမှတစ်ဆင့် ကျေးရွာအရောက် ၁၁ ကေဗွီလိုင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်ခြင်း၊ ရွာတွင်း ၄၀၀ ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်းများ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ဓာတ်အားဆောလျင်စွာ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။